iOS 14 ichaunza shanduko kuchiratidziro chemumba | IPhone nhau
iOS 14 ichaunza shanduko kuchiratidziro chemumba
Mamwe mashoko kubva kuIOS 14 anoratidza izvo Apple yakagadzirira dzimwe shanduko yeimba screen ye iPhone yedu. Sezvakaburitswa neMacRumors, Apple iri kugadzirira peji nyowani iyo yaizobvumidza vashandisi kuona kwavo kunyorera senge runyorwa.
Ruzivo urwu rwunoratidzira kuti isu tinogona kuona pane iro peji peji ese maapplication atakaisa nenzira yechinyorwa. Pari zvino tinogona kungoona mashandisirwo nekutsvaga mapeji akasiyana atakagadzirisa, tichivatsvaga kuburikidza nemafolda kana kushandisa injini yekutsvaga. Iye zvino tichava nesarudzo yekuwana peji nyowani panenge paine runyorwa nezvose zvikumbiro zvatiinazvo. Ichi chinyorwa zvakare Ichavaodhaira zvinoenderana nenzira dzakasiyana, kuti tikwanise kuona kuti ndeapi maapplication ane ziviso akamirira kuona, kana ekupedzisira atakashandisa.
Aya mazita achagadziriswa naSiri, ayo ichaita mazano ezvekushandisa zvatinoda kuwana zvichienderana nenzvimbo yedu kana nguva yezuva. Semuenzaniso, kana ikaona kuti tiri padyo nenzvimbo yedu yekurovedza muviri, ichaita zano rekuvhura iyo Music application kuti uiterere isu tichirovedza muviri.
Pamusoro peichi shanduko pachave nemasaini akasiyana ekuchinja pakati pemashandisirwo. Vaya venyu vanoshandisa macOS vane chokwadi chekuziva nemajenaguru aripo chinja desktop, chinja application kana tarisa windows ese atakavhura. Aya ma gestures anga achiitirwa kushandiswa neiyo nyowani trackpad keyboard iyo yatave kutaura zvakanyanya nezvayo nguva pfupi yadarika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » iOS 14 ichaunza shanduko kuchiratidziro chemumba
iOS 14 inobvumidza kuendesa wechitatu-bato mapikicha uye ichaenderana neAliPay